नायक आर्यन सिक्देलकी श्रीमती सपना भण्डारीको फोटोमोह हेर्नुहोस् तस्बिरहरू – PanchKhal Online
Home/मनोरंजन/नायक आर्यन सिक्देलकी श्रीमती सपना भण्डारीको फोटोमोह हेर्नुहोस् तस्बिरहरू
चर्चित नायक आर्यन सिक्देल र सपना भण्डारी बीच आज भन्दा करिब पाच वर्ष पहिले बिवाह बन्धन मा बाधिएका थिए ! हालै केहि समय अगाडी आर्यन र सपना बीच एक सन्तान को पनि आगमन भएको छ ! र पछिल्लो समय आर्यन सिक्देल कि श्रीमती सपना नेपालि रजपटमा देखिन थालेकी छिन ! पहिलो सन्तान जन्मिएपछि आर्यनकी श्रीमती सपना संचारमाध्यम हरु मा देखिन थालेकी छिन ! आर्यनकी श्रीमती गर्भवती हुदा आर्यन ले श्रीमती संग खिचेको फोटोहरु ले पनि नेपालि सोसियल मिडिया हरु मा तहल्का नै मच्च्याएको थियो ! समाचार हरु मा खास्सै नदेखिने आर्यन कि श्रीमती फोटो मोह भने उनको गज्जबकै छ ! उनले सामाजिक संजाल फेसबुक इन्स्टाग्राम हरु बाट समय समय मा तस्बिरहरु सेयर गर्ने गर्छिन !
जब आर्यनको नेपाली सिनेमामा प्रवेश भयो तबदेखि नै ऊ माथि २ वटा ट्याग झुन्डाइयो । एउटा ड्रंकर र अर्को लेडी किलर । टेलिभिजन होस या पत्रपत्रिकामा हरेक पत्रकारले उसलाई नछुटाउने दुई प्रश्न हुन्थे । तपाईँ धेरै रक्सी पिउनु हुन्छ रे हो ? केटी भनेपछि त तपाई हुरुक्कै हुनुन्छ रे नि ?आर्यन सिग्देलका २ वटा कमजोरी भनेकै केटी र रक्सी हुन भनेर ऊ माथि कहिलै नमेटिने स्ट्याम्प लगाइयो । अनि केही समय छि त उसलाई धेरै पारिश्रमिक लिने महंगा नायक र सिनेमाको स्क्रिप्ट पढेर मात्रै सिनेमा खेल्न राजी हुने चुजी र घमण्डी हिरोको संज्ञा दिइयो । यी यावत कुराहरुको सामना गर्दै नेपाली सिनेमामा टिकिरहनु उसको लागि ठूलो चुनौती थियो । अन्तत ऊ आफ्नो बल बुद्धि र दिमागले भ्याउनजेलसम्म लगिरह्यो र उसले आफूमाथि लागेका ट्यागहरुलाई गलत साबित गरिदियो ।
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नायक नायिकाहरु आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई भरसक लुकाउनै चाहन्छन् । उनीहरुलाई एउटा भ्रम छ, आफू विवाहित हुँ भन्दा फ्यान फलोइंग घट्छ र दर्शक हलसम्म सिनेमा हेर्न गइदिँदैनन् । त्यसैले आफू विवाहित भएपनि आफ्नी श्रीमतीका तस्वीर या श्रीमानका तस्वीरहरु सार्वजनिक गर्न चाँहदैनन् । यो मामलामा ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ, आर्यनको व्यवहार । विवाह पश्चात आफ्नी श्रीमतीसँगका रोमान्टिक तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दिनदिनै सार्वजनिक गरेर आफूलाई पत्नीभक्त प्रमाणित गराउन लागिपरेका छ ।
तर, आर्यनले दिनदिनै सार्वजनिक गर्ने तस्वीरहरुले केही प्रश्नहरु जन्माउँछन् । आर्यन लेडी किलर नै थियो भने ३० बर्षकै उमेरमा किन विवाह गर्यो ? अरुले परबाट देखे जस्तै र उसलाई बुझे जस्तै दिन दिनै केटी फेर्दै किन बसेन ? यही उमेरमा आएर घरजम गर्ने र आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने बारेमा किन सोच्यो ? जहाँसम्म आर्यन एक नम्बरको पियक्कड हो भन्ने कुरा छ अरुले परबाट देखे जस्तै र सुनेजस्तै ड्रंकर नै थियो भने राम्रो कूल घरनाकी एउटी शिक्षित युवती सपनाले किन जीवन साथीका रुपमा उसलाई स्वीकार गरिन ? पक्कै पनि सपनाले सिनेमाको पर्दा्भित्र देखिने नायक आर्यन सिग्देलसँग त सपनाले बिबाह गर्ने निर्णय त गरेकी थिइनन होला । किनकी धेरै वर्षको प्रेमपछि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन ।
वास्तबमा भन्नुपर्दा आर्यन नेपाली सिनेमाका लागि जन्मेकै हैन । उसका दैनिक क्रियाकलाप हेर्दा यस्तो लाग्छ ऊ लोकसेवा आयोग पास गरेर भर्र्ती भएको सरकारी जागिरे हो । जो बिहान काममा जान्छ, ड्यूटी पुरा गर्छ र घर फर्किन्छ । उसलाई छलकपट केही आउँदैन, गफ दिन आउँदैन, नौटकी गर्न आउँदैन न त कुनै राजनीति । जुन फिल्ड्मा ऊ छ, जहाँ यी कुराहरु अति आवश्यक छन् । तर उसलाई आउँछ त केवल अभिनय आउँछ अनि आफ्नो कामप्रति समर्पित हुन आउँछ ।
आर्यन सधै आफ्नै संसारमा हराइरहेको हुन्छ, उसलाई आफू बाहिरको दुनियाँ नै थाहा छैन । उसका सहकर्मी साथीहरु वरिपरि साथीभाई राखेर भट्टिमा बसेर गफ चुटिरहेका बेला ऊ घरमै एक पेग लगाएर मस्त निदाइरहेको हुन्छ । जुन क्षेत्रमा ऊ छ, त्यसमा पनि उसका सीमित साथीहरु मात्रै छन् । उसलाई हावा गफ दिन आउँदैन्, थोरै बोल्छ, चाहिने बोल्छ । सायद उसको यही बानीले होला धेरैले उसलाई मान्छेसँग घुलमिल हँुदैन, भाउ खोज्छ भनेर आरोप लाउने गरेका छन् ।
काग कराउदै गर्छ पीना सुख्दै जान्छ भनेझैँ जे जस्तो आरोपहरु उसलाई लागे पनि ऊ कामप्रति सधै इमान्दारिताका समर्पित भएर लागिपरेको छ । आज ऊ सँग उसको काम छ, घर छ अनि परिवार । आज सबैको नजरमा ऊ एउटा असल श्रीमान देखिएको छ, आशा छ भोलि असल पिता पनि भएर हरेक आरोप प्रत्यारोपलाई पछि पार्दै एउटा असल अभिभावक बन्ने छ र आफ्नो जीवनलाई पूर्ण बनाउनेछ ।